Egwuregwu ọhụrụ ndị bịara na gam akporo: izu nke February 15 | Gam akporosis
Ọhụrụ na nke kacha mma gam akporo egwuregwu nke izu nke February 15
Izu a anyị nwere nwere ụfọdụ akụkọ na-adọrọ mmasị na gam akporo na egwuregwu ụfọdụ, ọ bụ ezie na anyị ewetara gị coolest Androidsis egwuregwu nke ọnwa a nke mere na ị nwere ihe kachasị mma nke bịarutere n'aka anyị.
Ọ bụ ezie na n'ozuzu ya, ọ bụghị na ọ bụ ihe kachasị mma. Anyị ga-egosi ozi ọma ka anyị nwee ọfụma mgbe ị na-akpọ mkpịsị aka n’izu a nke February 15; oh na echefula ndị nke gara aga.
1 Akwụkwọ ozi Kitty
2 Infectonator 3: Apọkalips
3 Ebighebi alaeze
4 Ihe-iyi nke otuto
5 Omuma Tengai
6 Iberi knight
7 Ndewo Town 2048
8 Nọrọ agha 2
Akwụkwọ ozi Kitty
El egwuregwu ọhụrụ site n'aka ndị na-eme ihe na-agbawa agbawa Kittens ha na-ewetara anyị ụmụ kittens ọzọ mana anyị ga-akpọrọ ha ịlụ ọgụ na nchebe ụlọ elu. Ihe na-akpali mmasị bụ na anyị ga-etolite okwu na bekee iji mepụta nkeji nke meriri onye iro. Ee, ọ dị n’asụsụ Bekee.
Developer: Ihe na-emegharị Kittens, Inc.
Infectonator 3: Apọkalips
Egwuregwu Armor wetara anyị uzo ato nke egwu a na oria saga nke anyi gha ewepu oria zombie ka umu mmadu nwee nsogbu. Jiri nka pikselụ laghachi ọzọ, ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke zombies dị iche iche, ụwa dum map iji mara na ọtụtụ ọdịnaya anaghị akwụ ụgwọ.
N'ime egwuregwu ndị a enwere ọtụtụ na inlọ Ahịa Play, mana ma eleghị anya, ọ bụghị àgwà dị ka egwuregwu a nwere nke iwu ulo na ulo agha. A egwuregwu nke igwe dị iche iche dị iche iche, ma nke anyị na-agaghị eme ihe ọ bụla mgbe nkeji anyị ga-aga agha.
Ihe-iyi nke otuto
Un ọhụrụ akpaka ọgụ MMO na nke anyị ga-fọrọ nke nta na-eji oge anyị na-ajụ cinematics rue ha ma si otú larịị elu ngwa ngwa. Ọ nwere ụwa zuru oke na nkọwa, ma ọ bụ ihe ọzọ nke ụdị MMO ndị ahụ nwere ike ịbụ ndị agha ma ọ bụ mgbaasị. Ọ dị mma na ọkwa ọrụ aka na eserese.
Ọ ofụ nke ebube - Omume MMORPG
La nloghachi nke otu n'ime kpochapụwo matamarcianos na ọdịdị nke onye mọnk na-efe efe n'akụkụ ọhụụ nakwa na ọ ga-eche ajọ ndị iro na ndị iro dị iche iche ihu. Iji gosi ndị isi ha ikpeazụ na gburugburu ndị ahụ nnukwu buddha nke anyị ga-enwe na akwụkwọ ahụaja. A nnọọ na-eri ahụ na frantic egwuregwu.
A egwuregwu na guzo maka ndị agha ya nke anyị nwere knight na mma agha ma ọ bụ anyụike anyụike, nke na ngagharị ahụ nwere ike iwepụ ndị iro n'ụzọ dị mfe. Anyị ga-etinye ya n'ọnọdụ kachasị mma iji wepụ ndị iro mgbe niile na-elekọta bọmbụ ahụ.
Ndewo Town 2048
A ọtụtụ mgbaghoju anya nke anyị ga-ikpokọta ibe na otu uru inweta ego ọla edo nke ga - enyere anyị aka iwulite obodo anyị. A egwuregwu efu na-adịghị njọ ma ọlị ọ bụru ngwẹja-ukfuru.
HelloTown 2048 - Jikọta Tycoon
Nọrọ agha 2
Un atụmatụ ọgụ egwuregwu nke ị ga-etinye nkeji gị na ọgụ iji lụọ ndị agha ndị iro na nke ha. Dị nnọọ mfe na echiche echiche na ebe ọ nwere ike ịpụta na ọkwa dị elu mgbe anyị nwere nkeji karịa na ihuenyo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Ọhụrụ na nke kacha mma gam akporo egwuregwu nke izu nke February 15
Otu esi agabiga okwuntughe LastPass na Bitwarden